Waa maxay socod jimicsiga Vasalopp - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waa maxay socod jimicsiga Vasalopp
Publicerat fredag 4 mars 2011 kl 13.46
Sanad guurradda socod jimicsiga Vaslopp oo sanad walba laga xuso
Vasalopp-ku waa maxay, maxaadse ka taqaan? Waa su’aal u baahan in laga jawaabo. Vasalopp-ku waa orod ama socod, loo adeegsanayo qalab la koro oo barafka dushiisa lugula socdo inta luguha lu xirto. Waana tan ugu weyn ee adduunyada ee la isticmaalo. Maalinta axada oo ay taariikhda 6-da bisha maarso ayey ku aadan tahay sanadguuradda vasalopp-kaasi.
Socod la maro masaafo dhan 90 km, adigoo isku jeexaya deegaanada Sällan iyo Mora oo ka tirsan gobolka Dalarna ee gobolada dhexe dalkan Sweden. Waana mid la sameeyn jiray sanad walba tan iyo sanadkii 1922-kii. Marka ugu horeysa ee in la sameeyana ay tahay axada ugu heysa ee bisha maarso.
Iminka tartankan qalabka loo adeegsado ayaa lugu rakibay meelo kala duwan xilliga toddobaadkan ee Vasalopp-ka. Kuwaasoo loogu talagalay dadyow da'doodu kala duwan tahay. Jonas baure waa madaxa socodsanadeedkan barafka la maro ee vasaloppet-ka, waxaa uu ka waramay sababaha meelo kala duwan loogu rakibay qalabkan ee barafka lugu kor ciyaarayo. Waxaana uu sheegay iney yihiin kuwo xiiso dadka u qabaan oo dad tirro badani ay yimaadaan kana qeyb qaataan.
Marba haddii ay hadaba tahay mid cidkasta ay ka qeyb qaadan karto? Maxaa loogu bixiyey Vasalopp? Waxaa loogu bixiyey Vasalopp waa mid lugu xusay boqorkii Gustav Vassa ee dalkaan ka talin jiray xilli hore ka hor intii aanu u baxsan u baxsaday dalka Norway sanadkii 1521-kii, Waxaa loogu magac darray " Qadartii Gustav Vassa" ee socod ku maray inta u dhaxeysay degaanada Dalarna. Waana taxane taariikheed ku saabsan xilli ka horeysay intii uusan noqon boqoralka dalkan sanadihii 1520- ilaa 1521-kii.
Iyadoo laga sheekeeyo taariikhdiihiisii uu maxbuuska ugu ahaa boqrkii ka talinaayey dalkaasi Denmark ee Chiristian II. Wuxuu markaa kadib u soo baxday dalkan Sweden, kadib markii uu ka hor yimid boqorkii Chiristian-kii Denmark ee qabsaday qeybo kamid ah dalkaan. Waxaa markaasi kadib Gustav oo hiil raadsanaayey go’aansaday inuu u soo socdaalo deegaanada Dalarna ee dalka Sweden, kadibna uu socod dheer ku maray inta dhaxeysa deegaanada Mora iyo Sällan isagoo isticmaalyey qalabka lugu lugu jiido ee barafka lugula dul cararo.